Cajiibka: Faa'iidooyinka iyo faa'iido darrada Isticmaalka Istaraatiijiyada Black Hat SEO
Ka hor intaanay tartamayaashu isticmaalin xeeladaha koofiyadaha madow ee SEO ah. Bixiyeyaasha Internetku waxay isticmaali karaan xeeladaha koofiyadaha madow ee SEO si ay u darajeeyaan sare, kor u qaadaan sheekooyinka iyo, soo jiidaan gaadiidka badan iyada oo aan ku xadgudbin xeerarka Google. Sidaa darteed, waa maxay koofiyadda madow SEO? Ereyga 'Koofiyadda madow' waxa uu muujinayaa xeeladaha farsamada SEO ee jabiya mashiinka raadiyaha (tusaale ahaan, Google) hababka ugu wanaagsan iyo tilmaamaha. Noocyada ugu caansan ee koofiyadaha madow ee SEO ah ayaa ah diiradda kaliya ee lagu maareynayo darajooyinka iyo makiinadaha raadinta iyo lakulanka isticmaalaha - appraisal solutions ltd.
Koofiyadda madow ee SEO ayaa adeegsanaya hababka sida walxaha muhiimka ah ee loo yaqaan 'keyword content', 'automation' iyo 'article' si ay u dejiyaan waxyaabo hoose oo tayo leh isla markaana waxay maareynayaan taxanaha makiinadaha raadinta. Intaa waxaa dheer, koofiyada madow ee SEO wuxuu isticmaalaa dhismaha isku-xirka dhismaha xiriirka , abuuro wheel wheels, pages door, iyo links cloak. Google, ayaa ugu dambeyntii la xakumay oo qabtay qabashooyin khadad madow ah iyada oo ku daabacaysa casriyeynta Google Panda (liiska algorithm) oo sidoo kale loo yaqaan Google Penguin. Tan iyo markaas, goob kasta oo isticmaala farsamooyinka xariiqa madow waxaa ciqaabi doona Google. Marka la eego, gaadiidka dabiiciga ah ee goobta ayaa la iskugu duubi karaa iyada oo lagu darayo hababka koofiyadaha madow ee SEO ee ololaha dhismaha isku xirka laakiin habka koofiyadaha cad. Igor Gamanenko, oo ah Maamulaha Guud ee Macaamilka Sare Maamulaha Guusha Macaamiil, wuxuu ku siinayaa inaad eegto farsamooyinka koofiyadaha soo socda:
Xeeldheerta mid: Isku-xirka
Muraayadaha laydhka ah waxay heleen fuusto sida dhisme xariif ah dhawr sano ka hor..Intaa waxaa dheer, inta lagu jiro muddadaa, qaar ka mid ah koofiyadaha cad cad ee SEO ayaa ku ammaanay awoodda ku xirnaanta iskuxirayaasha isku xirka si ay u saameeyaan darajada bogga Google. Koofiyadaha madow waxay adeegsadeen wheel wheels si loo xoojiyo xoogga xiriirka la abuuray, iyada oo saameyn ku yeelaneysa soocinta bogagga shabakadaha sare ee natiijooyinka raadinta raadinta. Fikradda ka danbaysa isku-xirka gawaarida waa mid fudud - si loo dhiso qaabab website-yo ah oo isku xira hal site ilaa mid kale oo ay ku jiraan bogga ugu muhiimsan ee horumariyaha. Bog kasta oo shabakad ah ee muraayadda ayaa markaa awood u leh in uu hadalku ku hadlo. Muraayadaha isku xirka waxay abuurayaan nidaam xiran. Sidaa awgeed xiriirka 'xiriirka' wuxuu si joogto ah u sii wadi doonaa inuu koro ugu dambeyntii si toos ah ula xiriirta shabakada internetka.
Habka Labaad: Isku-dhafka Isku-dhafka
dhismaha isku-dhafka ee isku dhafan waa istaraatiijiyad soo celisa fikradda ah in uu leeyahay xiriiro badan oo lagu hagaajinayo rikoodhka bogga. Xeeldheerka ugu muhiimsan ee istaraatiijiyadani waa in lagu daro tixraaca websaydhka iyada oo la adeegsanayo bogagga kale ee shabakadaha si xiriir la leh sida New York Times. Sidan oo kale, milkiilaha goobta ayaa foolxumeyn kara makiinadaha raadinta si ay ula dhaqmaan boggooda internetka si la mid ah shabakadaha internetka, markaa waxay bixiyaan darajooyin sare.
Qaybta seddexaad: Tiered Link-Building
Istaraatiijiyadu waxay isticmaashaa fikradda ah in lagu xiro bogag intaa ka sii badan oo ah gadaal, sida dhisme isku dhafan oo isku dhafan. Si kastaba ha ahaatee, habka ayaa fududeynaya in mulkiilaha goobta uu dhisi karo isku xirka bogagga internetka ee hadda jira si loo hagaajiyo darajooyinka iyo maamulka. Koofiyadaha madow ee SEOs waxay abuuraan tiiryo xiriiriya leh iskuxirid kasta oo tilmaamaya midkii hore, ugu danbeyntii xoojinta dhabarka.
Qaybta afaraad: Xiriirinta Xiriirka
Koofiyadaha madow waxay isticmaali karaan codsiyada sida Scrapebox si ay ula socdaan internetka iyaga oo raadinaya wax kasta oo ka kooban mawduucyo muhiim ah iyo faahfaahinta xiriiriyaha webmaster. Macluumaadka waxaa loo isticmaalaa in loo diro codsiyada isku xirka tooska ah iyo dhisida xadgudubyo la iswaydaarsado. Sidaa darteed, adoo isticmaalaya qalabka wax lagu burburinayo, dadka isticmaala waxay falanqeyn karaan goob loogu talagalay dhibaatooyinka farsamo ee SEO.
Waxaa jira waxyaabo badan oo ku lug leh geeddi-socodka xidhiidhka. Tani waxaa ka mid ah tallaabooyinka lagu raacayo faahfaahinta xiriirka. Si aad uga sii gudubto tartamayaasha, sheyga interneetka ah waa inuu isticmaalaa Koofiyada SEO madow laakiin sida habka koofiyada cad